UTim Cook uvavanya iprototype entsha yezempilo yeApple Watch | Ndisuka mac
UTim Cook uvavanya iprototype entsha yezempilo yeApple Watch
Ubuchule eApple kubandakanya ukuphucula ubomi bemihla ngemihla bezigidi zabantu. Siyazi ukuba iApple ijolise kakhulu mva nje ekuboneleleni ngophuculo kwicandelo lezempilo, ukukhuthaza ukwenza umthambo nokuphila ubomi obusempilweni. Isinyathelo esitsha kule ndlela yiprototype entsha elinganisa inani leswekile esegazini, isixhobo esincinci nesitofotofo esijoyina iApple Watch.
Le prototype ikhomba ekuphunyezweni kwezicelo ezizayo eziza kuba nenkampani esekwe kwiCupertino kwiifowuni eziphathwayo nakwiApple Watch, kwaye oko kuyakubaluleka kwizigidi zabantu abanesifo seswekile okanye abasemngciphekweni wokufumana esi sifo.
UTim Cook, umphathi we-Apple wangoku, kuvavanye lo mzekelo mtsha, ngokuka CNBC. Ngapha koko, iingxelo zangaphambili sele zicebisile ukuba kungenzeka ukuba iApple isebenze kwindlela yokulawula iswekile yegazi ngaphandle kokungena kulusu lwakho.
UCook uqinisekisile ngoFebruwari, kwintetho awayinikela kwiDyunivesithi yaseGlasgow, ebekade esebenzisa uhlobo oluthile lwexesha elithile:
Kudala ndisebenzisa esweni iswekile yeglucose kwiiveki ezimbalwa. Ndivele ndayisusa ndingekafiki apha.
Iindlela ezikhoyo ngoku ziyakhathaza. Kukho ithemba elininzi kumzekelo wethu, njengoko ukuba umntu unolwazi rhoqo ngento ayityayo, banokwazi kwangoko ukuba ibangelwa yintoni kwaye benze ngokufanelekileyo, Ukunceda abantu abaninzi ukuba babe neswekile. Ndonwabile ngale ndawo yeApple. "
Siza kubona ukuba kunjalo Ekugqibeleni kule WWDC izayo xa iApple iveza esi sixhobo sitsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UTim Cook uvavanya iprototype entsha yezempilo yeApple Watch